22 | October | 2014 | Danya Wadi
အိန္ဒိယ စိန်သူဌေး ၀န်ထမ်းတွေ ကို အိမ်တွေ၊ ကားတွေ လက်ဆောင်ပေး
အမဒါဘတ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁ ပုံစာ။ လက်ဆောင်ပေးပွဲအခမ်းအနားကိုတွေ့ရစဉ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်က စိန်ကုန်သည်တစ်ဦးဟာ လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်ပြည့်မီတဲ့အတွက် ဆုလာဘ်အနေနဲ့ ၄င်းရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို ဒေါ်လာ ၈ သန်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကား၊ အိမ်နဲ့ စိန်တွေ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆူရတ်မြို့ က Hrishikesh Exporters ကုမ္ပဏီကိုပိုင်တဲ့ ဆက်ဗ်ဂျီဒဟိုလာကီ ဟာ ကား ၄၉၁ စီး၊ စိန်ထည် ၅၂၅ခု၊ တိုက်ခန်း ၂၀၀ တို့ကို ၀န်ထမ်းတွေကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သူ့ရဲ့ ၀န်ထမ်း ၇၅၀၀ အနက် ၁၂၀၀ကျော်ဟာ ယင်းလက် ဆောင်တွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၁၂ က ၀န်ထမ်း သုံးဦး၊ မနှစ်က ၀န်ထမ်း ၇၂ဦးတို့ကို ကားတွေ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ […]
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အီတလီထိပ်တန်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံ
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ တော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များသည် အောက်တိုဘာ ၁၉ရက် ဒေသစံ တော်ချိန် နံနက် ၁ဝနာရီခန့်တွင် တုရင်မြို့တော် ခန်းမရှိ ပလာဆိုချီဗီ ကို၌ကျင်းပသော အီတလီထိပ်တန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ ဆုံပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ တု ရင်မြို့တော်ဝန် မစ္စတာဖက်စီနိုနှင့် အတူ အီတလီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် ထိပ်တန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၄၉ဦးတက် ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မ တက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ သတ္တုတူး ဖော်ရေးကဏ္ဍ၊ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော် ရေးလုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင် ကဏ္ဍ၊ ဆက် […]
မြန်မာ့ဆန် အိန္ဒိယက လစဉ် ၀ယ်မည်
သစ်နေမိုး| October 17, 2014 အိန္ဒိယနိုင်ငံက မြန်မာ့ဆန်များကို လစဉ် တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူသွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။ “တလကို တန်ချိန် ၂သောင်းပေါ့။ သူတို့ ၁၀ လ ၀ယ်ဖို့ ရှိတယ်။ တင်ဒါ စနစ်နဲ့ပါ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ စိုးထွန်းက ပြောသည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့်လ အတွင်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆန်တင်သွင်းရန် တင်ဒါ ခေါ်ယူသော်လည်း မြန်မာဘက်မှ တင်ဒါ တင်သွင်းမည့် သူ မရှိသဖြင့် တင်ဒါ ပျက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ပြီးခဲ့တဲ့ တင်ဒါမှာ ဒီဘက်က ပြိုင်တဲ့သူ မရှိဘူး။ အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုကပဲ ၀င်ပြိုင်တယ်။ […]
ထူးထူးဆန်းဆန်း၊မြန်မာပြည်တွင်ဝါးစက်ဘီး ထုတ် လုပ်သည်
Mark Inkey| October 20, 2014 | ၀ါးစက်ဘီး(ဓာတ်ပုံ – Mark Inkey / The Irrawaddy) ၀ါးစက်ဘီး(ဓာတ်ပုံ – Mark Inkey / The Irrawaddy) ၀ါးစက်ဘီး(ဓာတ်ပုံ – Mark Inkey / The Irrawaddy) ၀ါးစက်ဘီး(ဓာတ်ပုံ – Mark Inkey / The Irrawaddy) ၀ါးစက်ဘီး(ဓာတ်ပုံ – Mark Inkey / The Irrawaddy) မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင့်ဝတ်နှင့် ကိုက်ညီသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ကြရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်၏ တောင်းဆိုမှု များကို အလေးထားသည့် အနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ လူငယ် ဇနီးမောင်နှံ […]
Dispatches: Decisive Action on Burma’s Rohingya Crisis October 21, 2014 John Sifton A lot has changed here in Burma in the last three years. Large-scale political prisoner releases have occurred. There has beenalessening of censorship and surveillance. The government has permitted some movement toward democratic reforms—although much of that progress now appears […]
October 18, 2014 အောက်တိုဘာ ၁၈ ၊ ၂၀၁၄ M-Media လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က ကျွန်တော်ဟာ HBO က Bill Maher ရဲ့ တီဗွီတင်ဆက်ပွဲဆိုင်ရာအုပ်စုထဲ ရောက်ခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာကိုယ်တိုင်က ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်လာစေတာ ဟုတ်မဟုတ် အငြင်းအခုံ အချေအတင် ဖြစ်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုက အော်ကြီးဟစ်ကျယ် စကားဝိုင်းအဆင့်အထိဖြစ်သွားခဲ့ပြီး အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်အထိ ကူးစက်ရောက်ရှိသွားတယ်။ Maher နဲ့ ဧည့်သည်တော်တစ်ဦးဖြစ်သူ Sam Harris တို့က အစ္စလာမ်ဟာ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့သာသနာဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံရေးအရ ကွဲလွဲမှုကိုခွင့်ပြုထားတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ အဲ့ဒီအပေါ် သရုပ်ဆောင် Ben Affleck က သူတို့ရဲ့မှတ်ချက်ဟာ အခြေအမြစ်မဲ့ပြီး လူမျိုးရေးဆန်လွန်းတယ်လို့ ရှုတ်ချခဲ့တယ်။ Ben Affleck […]